उपयोग को नियम - समाचार नियम | विज्ञान & प्रविधि रमाइलो समाचार
यो वेब साइट पहुँच द्वारा, तपाईं यी वेब साइट नियम र प्रयोग स्थितिहरु द्वारा बाध्य गर्न सहमत छन्, सबै लागू नियमहरू र नियमहरु, र तपाईं कुनै पनि लागू स्थानीय कानूनको अनुपालन लागि जिम्मेवार छन् भन्ने कुरामा सहमत. तपाईं यी शब्दहरुको कुनै सहमत छैन भने, तपाईं उपयोग वा यस साइट पहुँच निषेध छन्. यो वेब साइट मा निहित सामाग्री लागू प्रतिलिपि र व्यापार चिह्न व्यवस्था द्वारा सुरक्षित छन्.
2. प्रयोग लाइसेन्स
अनुमति अस्थायी सामाग्री को एक प्रतिलिपि डाउनलोड गर्न अनुमति छ (जानकारी वा सफ्टवेयर) व्यक्तिगत लागि समाचार नियम वेब साइट मा, गैर-व्यावसायिक transitory दृश्य मात्र. यो एक लाइसेन्स को अनुदान छ, शीर्षक को एक स्थानान्तरण, र यो लाइसेन्स अन्तर्गत तपाईं नहुन सक्छ:
परिमार्जन वा सामाग्री प्रतिलिपि;
कुनै पनि व्यावसायिक प्रयोजनको लागि सामाग्री प्रयोग, वा कुनै पनि सार्वजनिक प्रदर्शन लागि (व्यापारिक वा गैर-व्यावसायिक);
समाचार नियम वेब साइट मा निहित कुनै सफ्टवेयर ईन्जिनियर decompile वा उल्ट्याउन प्रयास;
सामाग्री देखि कुनै पनि कपीराइट वा अन्य स्वामित्व notations हटाउन; वा
अर्को व्यक्ति गर्न सामाग्री हस्तान्तरण वा “दर्पण” कुनै पनि अन्य सर्भर मा सामाग्री.
यो लाइसेन्स तपाईं यी प्रतिबन्धहरू कुनै उल्लङ्घन भने स्वतः समाप्त हुनेछ र कुनै पनि समय मा समाचार नियम द्वारा समाप्त हुन सक्छ. यो लाइसेन्स को समापन मा यी सामाग्री को आफ्नो दृश्य वा समाप्त मा, तपाईं इलेक्ट्रनिक वा मुद्रित ढाँचामा आफ्नो सम्पत्ति मा कुनै पनि डाउनलोड सामाग्री कि नष्ट पर्छ.
समाचार नियम वेब साइट मा सामाग्री प्रदान गरिन्छ “छ”. समाचार नियम कुनै वारंटी बनाउँछ, व्यक्त वा निहित, र hereby disclaims र सबै अन्य वारंटी negates, सीमा बिना सहित, implied warranties or conditions of merchantability, fitness foraparticular purpose, or non-infringement of intellectual property or other violation of rights. थप, News Rule does not warrant or make any representations concerning the accuracy, likely results, or reliability of the use of the materials on its Internet web site or otherwise relating to such materials or on any sites linked to this site.
In no event shall News Rule or its suppliers be liable for any damages (लगायत, without limitation, damages for loss of data or profit, or due to business interruption,) arising out of the use or inability to use the materials on News Rule’s Internet site, पनि समाचार नियम वा समाचार नियम अधिकृत प्रतिनिधि orally सूचित गरिएको छ भने वा त्यस्तो क्षति को संभावना को लेखन मा. केही jurisdictions निहित वारंटी मा सीमितता अनुमति छैन किनभने, वा consequential वा incidental हर्जाना लागि दायित्व को सीमितता, यी सीमाहरूलाई तपाईं लागू नहुन सक्छ.
5. संशोधन र इरेटा
समाचार नियम वेब साइट मा प्रदर्शित सामाग्री प्राविधिक समावेश सक्छ, typographical, या फोटो त्रुटिहरू. समाचार नियम वेब साइट मा सामाग्री को कुनै पनि सही हो कि वारंट छैन, पूर्ण, वा वर्तमान. समाचार नियम सूचना बिना कुनै पनि समय मा आफ्नो वेब साइट मा निहित सामाग्री परिवर्तन गर्न सक्छ. समाचार नियम छैन गर्छ, तथापि, सामाग्री अपडेट गर्न कुनै प्रतिबद्धता बनाउन.
समाचार नियम यसको इन्टरनेट वेब साइट लिंक को साइटहरु सबै समीक्षा छैन र कुनै पनि यस्तो जोडिएको साइट को सामग्रीहरू लागि जिम्मेवार छैन छ. कुनै पनि लिंक को समावेशीकरणबारे साइट को समाचार नियम द्वारा समर्थन मतलब छैन. कुनै पनि यस्तो जोडिएको वेब साइट को प्रयोग प्रयोगकर्ता आफ्नै जोखिममा छ.
7. प्रयोग Modifications को साइट नियम
समाचार नियम सूचना बिना कुनै पनि समय मा आफ्नो वेब साइट को लागि प्रयोग यी सर्तहरू संशोधन हुन सक्छ. यो वेब साइट प्रयोग गरेर तपाईं यी नियम र प्रयोग स्थितिहरु को त वर्तमान संस्करण द्वारा बाध्य गर्न सहमत छन्.
8. परिचालक व्यवस्था
समाचार नियम वेब साइट सम्बन्धित कुनै पनि दाबी व्यवस्था प्रावधान को आफ्नो संघर्ष सन्दर्भमा बिना लन्डन को राज्य को नियम द्वारा शासित हुनेछ.
सामान्य नियम र एक वेब साइट को प्रयोग गर्न लागू स्थितिहरु.